झापाको बिर्तामोडमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु – mero sathi tv
झापाको बिर्तामोडमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
झापाको बिर्तामोडमा कफ्र्यू जारी भएको छ । आज दिउसो १ः३० बजेदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कफ्र्यू जारी गरिएको प्रहरी उपरीक्षक विष्णु केसीले जानकारी दिनुभयो । पूर्वमा वसपार्क क्षेत्र, पश्चिममा चारपाने, उत्तरमा महानन्द चोक र दक्षिणमा विर्तावजारसम्म कफ्र्यू जारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बाबुरामले थाले फेसबुकबाटै चन्दा संकलन ! चुनावमा उठ्ने पैसा नभएपछि [भिडियो हेर्नुहोस ]
इन्टरनेट भनेको के हो ? कसरी चल्छ र काहा काहा बाट जोदिएको हुन्छ अनि यसको मालिक को हो ? हेर्नुहोस् यो विडियो